Zee5 Hipi App Download Ho an'ny Android [2022 Update]
Te-hampiasa ny safidy tsara indrindra amin'ny Tiktok ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ity fampiharana Android mahafinaritra Zee5 Hipi App ity. Hipi App no ​​endri-javatra namboarina naorina farany an'ny Zee, izay safidy tsara indrindra amin'ny Tiktok ary manolotra endri-javatra maro kokoa.
Araka ny fantatrao fa any India dia voarara ny fampiharana Shinoa sasany, izay ahitana Tiktok ary manana mpampiasa an-tapitrisany. Noho ny fandraràna dia diso fanantenana tanteraka ireo mpampiasa rehetra ireo, noho izany dia misy fampiharana marobe nampidirina ho solon'izay, saingy tsy mandeha tsara daholo ireo.
Noho izany zee5 dia fampiharana fialamboly, izay manolotra ny manampy ny endri-javatra farany fantatra amin'ny anarana hoe Hipi Apk. Io no fitaovana tsara indrindra hanaovana horonan-tsary fohy. Ny endri-javatra maro dia mitovy amin'ny TikTok, saingy misy endri-javatra maro samihafa sy vaovao.
Hizara ny momba an'ity fampiharana ity izahay. Noho izany, raha te hampiasa an'ity rindranasa ity ianao, dia ampirisihinay hijanona elaela miaraka aminay hahalalana bebe kokoa momba izany ary raha te-hisintona an'ity fampiharana ity ianao, dia mizara an'ity fampiharana ity aminao ihany koa izahay. Andao ho fantarina ny momba ity fampiharana ity.
Topimaso momba ny App Zee5 Hipi
Izy io dia rindranasa Android, izay novolavolain'ny Z5X Global FZ LLC. Manolotra sehatra hizarana horonantsary fohy izy io. Afaka mamorona clip mamorona isan-karazany ianao ary mizara izany amin'ny hafa, izay ahafahanao mampitombo ny lazanao sy bebe kokoa.
Izy io koa dia manolotra endri-javatra fanovana video namboarina, izay ahafahanao manova ny clip alohan'ny handefasana azy. Izy io koa dia manolotra ireo sivana farany indrindra, izay azonao ampiasaina sy mahatonga ny clip ho mahasarika kokoa ny mijery. Manolotra fitaovana isan-karazany izy io, izay ahafahanao manamboatra clip tsotra ho manintona kokoa.
The Video Editor dia manome ihany koa ny sasany amin'ireo vokatra mahagaga indrindra, izay azonao ampiasaina amin'ny clip rehetra ary mamorona azy. Misy taonina maro kokoa, izay azonao jerena amin'ny fidirana azy. Izy io dia fitaovana maimaim-poana, izay tsy mila karazana fiampangana premium fanampiny.
Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny vidiny mitovy zee5. Tsy maintsy mandoa Rs 99 isam-bolana ary Rs 999 ianao amin'ny fiampangana isan-taona ny famandrihana. Misy koa ny fidirana amin'ity fitaovana ity, izay midika fa afaka miditra amin'ny vidiny mitovy ianao, tsy misy zavatra tokony aloa bebe kokoa.
Amin'ny ho avy, miaraka amin'ny fanavaozana vaovao sasany, dia misy ny fahafahana hahazo vokatra fanampiny, izay azonao vidiana hidirana amin'izy ireo. Saingy amin'izao fotoana izao, tsy misy fananana azo amidy maimaim-poana avokoa. Misy endri-javatra maro kokoa amin'ity fampiharana ity, izay azonao jerena amin'ny fampiasana ity fampiharana ity.
anarana Zee5 Hipi
Anaran'ny fonosana com.zee5.hipi
Endri-javatra manan-danja amin'ny Zee5 Hipi App
Nozarainay taminareo rehetra ny sasany amin'ireo fiasa amin'ity rindrambaiko ity, saingy misy bebe kokoa. Noho izany, hizara ny lisitry ny endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity izahay rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Sivana, effet, stickers ary maro hafa
Votoatiny avo lenta
Horonan-tsary fohy hijerena
Ahoana no fomba hisintonana ny Zee5 Hipi Apk?
Raha te-hisintona an'ity rindranasa ity dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na azonao atao ihany koa ny maka azy avy amin'ity pejy ity. Mba hanaovana izany dia mila mahita ny bokotra fampidinana eto amin'ity pejy ity ianao, izay hita eo an-tampon'ny sy ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Aza adino ny mamela ny 'Source tsy fantatra' avy amin'ny fametrahana Security alohan'ny fizotry ny fametrahana.
Zee5 Hipi App dia ny safidy an'ny Tiktok, izay manolotra endrika vaovao sy mahavariana taonina ho an'ireo mpanamboatra horonantsary fohy ary io no fomba tsara indrindra hahazoana laza. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka manamboatra horonan-tsary. Raha mila fampiharana misimisy kokoa, tsidiho hatrany ny Website.
Sokajy Apps, Social Tags Video Editor, Zee5 Hipi, Zee5 Hipi Apk, Zee5 Hipi App Post Fikarohana
Aha Apk Download ho an'ny Android 2022 Fanavaozana vaovao